Su’aalo iyo Jawaabo – OneFuture
Yaa loogu talagalay “Hal-Mustaqbal” (Onefuture)?
“Hal-Mustaqbal” (Onefuture) waxaa loogu talagalay dadka oodhan ee ku cusub Switzerland una baahan caawin ama kaalmo. Ama noqo qaxooti ama muhaajir ama ahow qof aan waraaqo sidan, xagaynu muhimad kama aha. Hadii aad u baahato caawin ama kaalmo fadlan ha ka hakan ama ha ka baqan in aad u timaado bulshadeena ama na soo raadiso.
Waa maxay waxyaalaha caawimaada ama kaalmada ah oo aan ka heli karo “Hal-Mustaqbal” (Onefuture)?
“Hal-Mustaqbal” (Onefuture) waa bulsho dad ah oo raba ama doonaya in ay caawiyaan ama gacan siiyaan ama kaalmo bixiyaan. Qof walba siduu rabo ama kari karo ayuu u caawin ama u kaalmeen,
wax yaalaha aynu hadda bixino si bulsho ahaan way badan yihiin oo ay kala duwan yihiin: laga bilaabo caawin ama kaalmo lugad ahaan ah ilaa iyo caawinta ama kaalmada xaga nidaamka sharciga ee Swiss,
Waxa kale oo jira dad deegaanka ah oo diyaar u ah kulan bulshadeed. Waxaynu na aad ugu diyaar nahay in aynu ku darno nooc kasta oo caawimo, ama kaalmo oo la doonayo ama loo baahanyahay.
Sideen u la xiriiraa qof caawiye ah?
Adigoo isticmaalayo boosteegadeena (safxada internetka), waxaad arkeysaa caawinayaasha ama kaalmo bixiyeyaasha oo dhan ee la heli karo, kaliya dooro si sahlan caawinaha/kaalmeeye ama caawinada/kaalmeeyad oo aad isleedahay wuu ku caawini karaa ama way ku caawini kartaa waqtiyada aad u baahantahay. Kaliya riix muuqaalkiisa ama muuqaalkeeda (Borofayl-kooda), kadib bilaaw in aad iyaga la hadasho.
Wax lacag ah oo la bixin miyaa jira?
Wax ala oo lacag ah oo la bixin ma jiraan, waqti kasta ha ahaato.
Sideen u noqdaa caawiye/kaalmeeye? Iyo maxaa la ga wadaa in aan noqdo caawiye/kaalmeeye?
Kaliya buuxi foomkeena isqorida ah oo aad ka heli website-keena (Buuxintiisa waxay qaadan 3 daqiiqado) kadibna waad bilaabi! Ma jirto wax balan qaadid ah ama wax dadaal-hore ku lug leh, waxa keliya ee aad u baahantahay waa in aad tilmaamto in ay dadka kula soo xiriiri karaan haddii ay u baahanyihiin kaalmadaada ama in aad caawiso.
Xagaynu ku kulmaynaa?
Aad baynu kugu la talin in uu kulan kaagu noqdo meel bulshadeed, oo taasu macnaheedu tahay in aadan samayn kulan ah guriga kaalmeeyaha ama caawinaha ama ardayga ama meel aadan dareemayn in uu aamin yahay. Tu saalo, dooro meel dukaan kofi ah, ama maktabad ama jaamacada ama xarumaha wada-hawlgalayaasheena (Khayraadka à Meelaha kulanka).
Sidee ula xiriiraa qof haddii ay jirto mushkilad ama dhibaato?
Hadii aad haysato dhibaato dagdag ah, booliiska ka wac 117, ama gargaar ambalaaska ka wac 144 ama waaxda dabka (dab damiyaha) ka wac 118, adigoo ku xisaabtamaya sida ay arintu tahay. Haddii aad qabto su’aalo ama arintu ay mugdi kugu tahay oo aadan fahmin markii aad kulan ku jirto, fadlan si dhaqso ah noogu soo sheeg ama nasii ra’yi-celin.
Maxaa dhici karo hadii aan layhay Muuqaal (Boroofayl) kaalmeeye ama caawiye laakinse aa fasax kujiro ama waqti aanan hayn?
Uma baahnid in aad tirtirto muqaal-kaaga (boroofayl-kaaga), kaliya ka dhig xaaladaada in aad maqantahay waanad badali kartaa xaaladaada markaad doonto ama rabto.
Muuqaalada (boroofay-lada) kaalmiyayaasha ama caawinayaasha miyaa la xaqiijiyey?
Kooxdeena way arkaan muqaal walba (boroofayl-walba) oo la sameenayo, Haddii ay jiraan wax shaki ah oo ku saabsan sharafta ama daacad-nimada qofka milkiilaha ama qofka leh muqaalka (boroofayl-ka) cusub, xubno kooxdeena ka mid ah ayaa la xiriiri qofkaa oo hubsan.
Waxaynu isku dayeynaa in aan hubino xaqiijinta oo waynu ku dari doonaa mustaqbalka muujin dheeraad ah si uu u horumaro habka wax loo qabto.
Sideen ugu soo biiraa kooxda asaasiga ah?
Haddaad rabto ama doonayso in aad kaalmeen ama caawin samayso iyo in aad ka mid noqoto hay’ad cusub oo faa’ido doonka ahayn, noogu soo dir macluumaad-kaaga cinwaankan info@onefuture.ch
Maxaa dhacaya haddii aan fikrad wayn u wado ama u hayo hay’ada Hal-mustaqbal “Onefuture”?
Waynu xiiseynaynaa wax ku darsi oodhan, iyo fikrado, iyo iskaashi oo suurtagal ah. Waxaynu u aragnaa hay’ada Hal-mustaqbal “OneFuture” hay’ad ah bulshad wayn oo furan, sidaas awgeed, fadlan noo soo sheeg waxa aad maskaxda ku haysid!
Maxaa dhacaya haddii aan su’aalo dheeraad ah wato ama jawaab u doonayo?
Haddii aad haysato su’aalo waxay ahaato ba, waxaad kari kartaa in aad isticmaasho foomka xiriirka oo aad ka heli qaybta ah “ku saabsan – About” ama noogu soo dir iimeel cinwaanka info@onefuture.ch, waxaad kale oo aad si toos ah uu la hadli kartaa ama xiriiri kartaa xubnaha kooxdeena.
"Bulsho ahaan, waxaanu rabnaa in aan kor u istaagno oo aynu gacan bixin samayno
Waynu isku xirmeenaa si toos ah, si bani aadam iyo bani aadam ah.
Xaga Hal-mustaqbal (Onefuture) waxaynu rabnaa in aynu u saameyno dad badan samayn weyn ."
Meeshan waxaad ka heli caawimaad ama kaalmayn kuugu dhow
Samee Muuqaal-kaaga (boroofayl-kaaga) oo gacan bixi ama ka qayb gal